Aluminium Carbide Powder, Al4C3 - Goodao Technology Co, Ltd.
Molecular fomula Al4c3
Nzvimbo yakanyunguduka 2100'C
Kuwanda kwehukama (mvura = 1) 2. 36g / cm3
Zvishandiso yesimbi uye inokonzeresa, aruminiyamu carbide inogona kushandiswa seyeyeye-kumhanyisa chishandiso hasha
Kemikari fomula Al4C3
Molecular huremu 143.96 CAS
Chitarisiko uye zvivakwa: yero kana greenish-grey makristasi kana hupfu, hygroscopic.
Nzvimbo yakanyunguduka (℃): 2100
Kuwanda kwehukama (mvura = 1): 2.36
Nzvimbo yekubikira (℃): 2200 (kuora)
Solubility: insoluble muacetone
Aluminium carbide inowanzo shandiswa sechiwedzera kuwedzera simba rezvinhu zvitatu zvealuminium base (al-Si-ALC, al-AlTI-ALC). Uye zvakare, AlC chinhu chakakosha chikamu mumunda wesimbi-aluminium indasitiri tekinoroji. Iyo inoshandiswa kudzikisa simbi oxides mu metallurgia indasitiri, kemikari reaction catalysts mune kemikari indasitiri, uye zvemberi zvedongo zvigadzirwa senge yakanyanya tembiricha, kucheka uye kuumbwa mune zvedongo indasitiri. Seyoni yeonioni, maatomu ekabhoni aripo mune yakasarudzika C fomu mune yakatetepa chimiro cheAlC. C ine yakasimba alkalinity uye inogadzira methane kuburikidza C + 4H → CH panguva yehydrolysis, saka AlC zvakare ACTS se methane jenareta uye desiccant. Panguva imwecheteyo, iyo rhombohedron ye
AlC imwe nzira yakarongedzwa yakarongedzwa yeAlC uye AlC zvidimbu. Iyi ndiyo yakasarudzika mamiriro inoita imwe-yemhando AlC nanowires inogona kutonhora elektroni emitter.
1) aluminium nitride poda yakagadzirirwa zvichienderana nealuminium carbide, inosanganisira:
(a) huwandu hwakakodzera hwe micron aluminium upfu uye micron kabhoni poda yakasanganiswa zvakaenzana, inopisa kune yakatemerwa tembiricha mune inert mhepo, yakachengetwa kwenguva yakati, ndokuzoitwa kugadzira aluminium carbide;
(b) Pisai aruminiyamu carbide kune yakatemerwa tembiricha inoyerera ammonia gasi kana nitrogen gasi woibata kwenguva, woita neammonia gasi kana nitrogen gasi kuti iite aluminium nitride munzvimbo ine tembiricha yakakwira. Kuburikidza nekugadzirwa, aruminiyamu nitride poda inogona kugadzirirwa pane yakaderera tembiricha, ine yakachena kuchena, diki chidimbu saizi uye yunifomu chidimbu saizi kugoverwa, yakakwira yekushisa dhizaini uye yakanakisa kudziya uye mechina zvivakwa, izvo zvinogona kushandiswa zvakanyanya mumunda wedesiki wedunhu. substrate zvinhu.
Yakagadzirwa nealuminium carbide nanoribbon. Iyo inokwenenzverwa nealuminium-silicon alloy inoiswa muchoto, musuwo wevira rakavharwa uye vira rakabviswa kusvika 50Pa ~ 10-3Pa, ipapo gasi rinodzivirira rizere neArgon, uye tembiricha inopisa kusvika 700 ℃ ~ 1600 ℃ kwemaawa 1-20, ipapo chinokurovererwa chiri zvakasununguka kutonhorera kune yakajairwa tembiricha, uye mazhinji yero aruminiyamu carbide nanoribboni anogadzirwa pamusoro pechinhu chesimbi uye yemukati madziro e graphite Kukuru Mukutonga kwechiFascist. Iyo aluminium carbide nanoribons yakagadzirirwa neyakagadzirwa yakatetepa muukobvu uye ine mashoma marara; Kureba kwealuminium carbide nanoribons kune mamirimita akati wandei.
Mari yekukura yealuminium carbide nanoriboni yakaderera kwazvo. Hapana kusvibiswa kwezvakatipoteredza, michina yekugadzirira yakapusa.
Pashure: Manganese Carbide Upfu, Mn3C
Zvadaro: Vanadium Carbide Upfu, VC
Titanium yealuminium carbide yeupfu Mafekitori
Titanium yealuminium carbide yeupfu Fekitori
Titanium yealuminium carbide powder Mugadziri
Titanium yealuminium carbide poda Vagadziri